Womenmụ nwanyị dị ime na-ewere ọgwụ Migraine Valproate nwere ike belata IQ nwata, FDA kwuru - Ụwa 2022
Womenmụ nwanyị dị ime na-ewere ọgwụ Migraine Valproate nwere ike belata IQ nwata, FDA kwuru
Ndị nne dị ime nwekwara ihe ọzọ ha ga-ezere.
Ọ bụ ezie na nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) akwadoro iji ọgwụ ndị nwere valproate maka isi ọwụwa migraine, ọrịa epileptic, na ọrịa manic nke ọrịa bipolar, ọ na-adọ ndị inyom dị ime aka ná ntị ka ha zere ngwaahịa valproate dị ka nchọpụta na-adịbeghị anya na-egosi na ha nwere ike ịkpata. nsogbu ọmụmụ ọmụmụ.
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke Dr. Kimford Meador na ndị ọrụ ibe ya, nke Journal of the American Medical Association bipụtara, na-egosi na ikpughe prenatal na ọgwụ ndị nwere valproate na-abawanye ohere nke nwata autism na, n'ụzọ yiri ya, na-emetụta ọnụ ọgụgụ ụmụaka IQ na-adịghị mma.
Nchọpụta ahụ ewepụtabeghị oge kpọmkwem n'ime ime ime na ikpughe valproate nwere ike inwe mmetụta kachasị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọgwụ ahụ na-emetụta mmepe ọgụgụ isi, ma eleghị anya na-akpata nkwụsị uche, FDA na-eme nlezianya dị mkpa iji dọọ ndị nne aka ná ntị mmetụta ọgwụ na-emetụta ụmụ ha.
Autism na nkwarụ ọgụgụ isi na-abụkarị n'ihi mgbanwe nke mkpụrụ ndụ ihe nketa mmadụ. Ọtụtụ mgbe, ọgwụ na-arụ ọrụ na ọkwa nke mkpụrụ ndụ ihe nketa iji gbanwee mkpụrụ ndụ ihe nketa na-agbanye ma ọ bụ gbanyụọ, na-agbanwe ụdị ụmụ irighiri ihe ndị dị n'ime ahụ ndị ọzọ, nke nwere ike ịdị mma ma ọ bụrụ na mgbanwe ahụ na-enye ohere maka njikwa ọdịdọ.
Ọ bụrụ na ndị nne dị ime na-aṅụ ọgwụ, dị ka valproate, nke na-agbanwe ọdịdị mkpụrụ ndụ ihe nketa ha, ụmụ ha e bu n'afọ pụkwara inwe otu mgbanwe ahụ na mkpụrụ ndụ ihe nketa. Otú ọ dị, ụmụaka nwere ike ọ gaghị enwe otu mkpa dị ka nne ha, na mgbanwe nke okwu nke ụdị ụfọdụ nke ụmụ irighiri ihe nwere ike bụrụ ihe na-ehichapụ kama ọ bụ ihe dị mma maka ha, na-ebute adịghị ike nghọta dị ka autism na nkwụsị uche.
Nchọpụta a na-egosi na ụmụ nwanyị ndị ọnọdụ ha na-enweghị ike ijikwa na-enweghị ọgwụ ndị a kwesịrị ịtụle usoro nchịkwa ọmụmụ dị irè.
FDA na-arụ ọrụ ugbu a na ndị na-emepụta ihe na-akpakọ ọgwụ nwere valproate iji hụ na ịdọ aka ná ntị ọhụrụ a na-egosipụta na akara.